खुशी कसरी रहने ? यस्ता छन ७ बानी जसले तपाईलाई खुशी रहन सिकाउनेछ । - Lekhapadhee Lekhapadhee - खुशी कसरी रहने ? यस्ता छन ७ बानी जसले तपाईलाई खुशी रहन सिकाउनेछ ।
खुशी कसरी रहने ? यस्ता छन ७ बानी जसले तपाईलाई खुशी रहन सिकाउनेछ ।
लेखापढी १ चैत्र २०७६, शनिबार १०:२६
खुशी रहनु मानिसको जन्मजात स्वभाव हो । यसको उदाहरण हामी सानो बच्चालाई लिन सक्दछौं । आखिर बच्चा कसरी खुशी हुन सक्छ । हामी प्रायःजसो उदाहरण दिदाखेर आफ्नो जीवनकालका सबैभन्दा खुशीका दिनहरु आफ्नो वाल्यकाललाई सम्झन्छौं । हाम्रो जीवनका राम्रा दिनहरु भनेका बालककालका दिनहरु हुन । बाल्यकाल सबैका लागि स्मरणयोग्य हुन्छ । हामी बाल्यकालमा सुख होस वा दुःख होस हामी खुशी अवस्य हुन्छौं यसको अर्थ हामी जन्मजात खुशी हुन्छौ ।
बालबालिकालाई खुशी हुन कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन । तर जब हामी विस्तारै विस्तारै ठुला हुँदै जान्छौ वा हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ हामी घर, परिवार, वातावारण, समाजमा घुलमिल हुँदै जान्छौं र विस्तारै विस्तारै हामी भित्र दुःख बढ्दै जान्छ । विस्तारै दुःख यति बढ्दै जान्छ की हामी प्राकृतिक खुशीलाई विर्सदै जान्छौ र हामीभित्रको खुशी लुटिन्छ र हाम्रो स्वभाव परिवर्तन हुँदै जान्छ र हामीलाई यस्तो लाग्छ की हामी जन्मजात नैं दुखी थियौं र यो नैं प्राकृतिक प्रवृत्ती हो ।
सबै मानिसहरुको साथमा दुःख नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै जसो मानिसहरु आफ्नो जीवनमा हेप्पी वा खुशी रहने प्राकृतिक अवस्थालाई बचाइराख्न सक्दछन जसले उनीहरु एउटा सुन्दर खुशी जीवन विताउँदछन् । जो मानिस खुशी जीवन विताउदछन् के तिनी मानिसको जीवनमा दुःख हुँदैन त ? होइन, सबै मानिसको जीवनमा सुख र दुःख हुन्छ । सुख र दुःख एउटा रथका दुइ पांग्रा हुन । तर जो मानिस व्यर्थको चिन्ता गर्दैन र प्रायजसो हासि खुशी बस्छन् त्यसप्रकारका मानिसहरु खुशी साथ जीवन विताउँदछन् ।
सबै मानिस खुशी रहन चाहन्छन् । तर के सबै मानिस खुशी रहन सक्छन् एउटा गम्भिर प्रश्न खडा हुन्छ, कुनै मानिसहरु सधै खुशी रहन सक्छन भने बाँकी मानिस किन खुशी रहन सक्दैनन् वा किन दुःखि हुन्छन् । आखिर मानिसलाई तनाब र भागदौडमा पनि कसरी खुशी मिल्दछ भन्ने विषयबारे जानौ ।
आज हामी यहाँ ७ वटा बानिहरु जसले तपाईको जीवनमा पनि खुशीको बहार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।
बानि नं. १ः खुशी रहने व्यक्ति राम्रो मात्र सोच्दछन भने नराम्रो कुरामा पनि राम्रो खोज्दछन् ।
मानिसको प्राकृतिक प्रवृत्ति नकारात्मकतालाई धेरै चाँडो टिप्दछन् । मनोवैज्ञानिकहरु यसलाई “नकारात्मक पूर्वाग्रह” भन्छन् । धेरै जसो मानिसहरु अरुमा कुनै कमजोरी छ भने त्यसलाई चाँडै देख्दछन् तर कसै भित्रको राम्रो चिजलाई देख्न सक्दैनन् वा राम्रो पक्षका बारेमा विशेष जोड दिँदैनन् । तर खुशी रहने व्यक्ति हरेक भित्र राम्रो चिजको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, हरेक वस्तुमा राम्रोको कल्पना गरिरहेको हुन्छ र सोच्ने गर्दछ जे हुन्छ राम्रैको लागी हुन्छ । कुनै पनि मानिस भित्रको राम्रोपन देख्नु सजिलो विषय हो यसका लागि हामीले आफैलाई एउटा प्रश्न गर्नु जरुरी छ की आखिर त्यो मान्छे किन असल छ ? र तपाईको दिमागले सोच्नेछ की त्यो मान्छे राम्रो हो र तपाईको मस्तिष्कमा सकारात्मक विचारहरु प्रवाह हुदै जानेछन् ।
एउटा महत्वपूर्ण कुरा तपाईले राम्रो कुरा कुनै व्यक्ति मा मात्र होइन जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सकारात्मक रहनु पर्ने हुन्छ । मानौ तपाई कुनै जागिरका लागि मौखिक परिक्षाका लागि जाँदै हुनु हुन्छ, तपाईले यस्तो सोच्नु पर्ने हुन्छ की सायद भगवानले तपाईलाई यसभन्दा राम्रो विकल्प दिएको पनि हुन सक्छ । अहिले भएन के भयो, भविष्य कसले देखेको छ यो भन्दा पनि राम्रो हुनसक्छ भन्ने भावना तपाईको मनभित्र हुनु जरुरी हुन्छ ।
बनि नं. २ खुशी रहने मानिस माफि माग्न र दिन जान्दछ ।
सबै मानिस भित्र अहंकार रहेको हुन्छ । कहिलेकाहि जानेर वा नजानेर कसैले मानिसको अहंकार वा भावनामा ठेस पुर्याउने कुरा वा काम हुने गर्दछ तर यसमा खुशी रहने व्यक्ति यस्तो सानो तिनो कुरा सम्झेर त्यस्ता विषयहरुलाई मनमा राखेर बस्दैन । यदि कसैले जानेर वा नजानेर गल्ति गर्यो भने पनि उ उसलाई माफि दिन्छ र आफूले गरेको गल्तिमा पनि सहजै माफि माग्दछ । यदि कसैले जानेर पनि गल्ति गर्यो भने पनि उसले यसमा उसको भन्दा पनि उसको सोच, स्वभावको गल्ति हो वा उसले जति जानेको छ त्यत्ति गर्यो भनेर उसले उसलाई माफि दिन्छ । खुशी रहने व्यक्ति माफि माग्न कहिल्यै पनि हिचकिचाउँदैनन् ।
माफिले मानिसलाई सानो बनाउँदैन बरु महान बनाउँदछ । खुशी रहने मासिन सधै माफि दिनुहोस वा एस्क्युज मी, क्षमा गर्नुहोस भन्ने शब्दहरुको प्रयोग गर्नका लागि कञ्जुसि गर्दैन ।
बानि नं. ३ खुशी रहने व्यक्ति आफ्नो चारै तर्फ समर्थन वा साथको विकास गरिरहेको हुन्छ ।
कुनै पनि मानिसका लागि साथ वा समर्थन एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । जीवनमा खुशी रहनका लागि मानिसलाई परिवार र साथीहरुको समर्थन वा साथ अति आवश्यक हुन्छ । यदी तपाईसँग धेरै धन सम्पत्ति छ भने त्यसले तपाईलाई सुख दिन सक्ला तर खुशी नदिन पनि सक्दछ । त्यसैले खुशी रहने मानिस आफ्नो चारैतिर समर्थन वा साथको विकास गरिरहेको हुन्छ ।
खुशी रहने व्यक्ति आफ्नो परिवार र समाजमा राम्रो सम्बन्धको विकास गरिरहेको हुन्छ । घर परिवारको खुशीमा साथ दिनु, सामाजिक कार्यमा साथ वा सहयोग गर्नुले तपाईलाई खुशी रहन मद्दत पुग्दछ । यदी तपाईले गर्नुभएको कामको परिवार र समाजबाट पनि साथ मिल्यो भने तपाईलाई खुशी रहिरहन अझ मद्दत पुग्दछ ।
जति तपाई मिलनसार, मिजासिलो हुनुहुन्छ त्यत्ति नै तपाई खुशी रहन सक्नु हुन्छ ।
बानि नं. ४ खुशी रहने मानि आफ्नो मनले रुचाएको काम मात्र गर्दछन् वा जुन काम गर्दछन् त्यसमा मन लगाएर गर्दछन् ।
यदी तपाईंले आफूलाई मन पर्ने काम गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाई खुशी रहनुहुन्छ र मन लगाएर काम गर्नु हुन्छ । सबै जना कहाँ यति भाग्यमानी हुन्छन् की उनीहरुले मन पराएको काम मात्र गर्न सकुन् तर खुशी रहने मानिस जुन काम गर्दछन् त्यसमा पनि मन लगाएर काम गर्दछन् । मन नपराएको काम पनि मनदेखि नंैं खुशी भएर अँगाल्ने मानिस खुशी रहन्छ ।
प्राय जसो मानिसहरुले आफूले गर्ने कामलाई नराम्रो मात्र सोच्दछन् र साथीभाईहरुसँग कुरा गर्दा पनि आफ्नो जागिर वा काम नराम्रो मात्र भन्ने गर्दछन् जसले उनीहरुलाई खुशी हुनबाट बञ्चित गर्दछ । तर यहाँ खुशी रहने मानिसहरु आफ्नो काममा रमाउँदछन् ।
बानि नं. ५ खुशी रहने मानिस आफ्नो दिमागमा आउने विचारमा पक्का गदैन वा दिमागमा खेल्ने विचारहरुमा विश्वास गर्दैनन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार मानिसको मस्तिष्कमा दैनिक ६० हजार देखि ९० हजार विचारहरु आउने गर्दछन् । हरेक व्यक्तिको औसतरुपमा हेर्ने हो भने सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सोचहरु बढी आउने गर्दछन् । यदी दैनिक रुपमा आउने नकारात्मक विचारहरुलाई चयन वा अबलम्बन गर्नू भयो भने तपाई कसरी खुशी रहन सक्नुहोला ?
यसैले खुशी रहने मानिस दिमागमा आउने नकारात्मक विचारहरुलाई फस्टाउन दिदैनन् । संकाको फाइदा उठाउँदछन् । विचारहरुको तुलना गर्दछन् यो असल हो वा यो खराब हो, हरेक विषयमा संका गर्दछन् जसले उनीहरुको दिमागमा रसायनहरु उत्पादन हुन्छन् जसले तपाईलाई खुशी रहन सहयोग पुग्दछ ।
जब तपाई नकारात्मक विचारहरुलाई चयन गर्नुहुन्छ भने तपाई पक्कै पनि खुशी हुनु हुने छैन त्यसैले मनमा आउने विचारहरुलाई तत्काल लागु नगर्नुहोस र झट्ट मनबाट आउने कुनै पनि कुरामा निर्णय नगर्नुहोस ।
बानि नं. ६ ः खुशी रहने मानिस आफ्नो कामलाई कुनै ठुलो उद्देश्य वा लक्षसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन् ।
एक पटक एउटा मानिस सहरमा हिडिरहेको थियो, उसले एउटा भव्य घर बनाइरहेको ठाउँमा तीन जना मजदुरहरु लाई सोध्यो की तपाई के गर्दै हुनु हुन्छ । पहिलो ले भन्यो देख्नुहुन्न म इटा बोकिरहेको छु । दोश्रोले भन्यो म आफ्नो पेट पाल्नका लागि काम गरिरहेको छु । तेश्रोले भन्यो म यो सहरमा भव्य मन्दिर खडा गरिरहेको छु । पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा भयो होला ती तीन जना मजदुर मध्ये कुन बढी खुशी होला ।
बानि ७ः खुशी रहने मानिस आफ्नो जीवनका हरेक सुख वा दुःख वा जीवनका घटनाहरुको जिम्मेबारी आफैलाई मान्दछन् ।
खुशी रहने व्यक्ति जिम्मेवारीको बारेमा थाहा पाउँदछन् । यदी आफूलाई नराम्रो भयो भने अरुलाई दोष लगाउँदैनन् । उनीहरु आफैलाई जिम्मेवार ठान्दछन् । जस्तो तपाई कार्यालयका लागि निस्कनुभयो, बाटोमा जाम छ, तपाईलाई ढिलो हुँदैछ तर गाडिहरु जामले गर्दा तपाईलाई ढिलो हुँदैछ । सुखी रहने मानिस ट्राफिक प्रहरी वा सरकारलाई दोष दिदैनन उनि भन्दछन् म अलि चाँडो घरबाट हिड्नु पर्ने थियो ।
आफ्नो सफलताको अरुले प्रशंसा गरुन वा नगरुन आफ्नो असफलताको जिम्मेबार आफैलाई मान्नु भयो भने तपाई खुशी रहन सक्नुहुन्छ । यदी तपाईसँग हुने नराम्रोको जिम्मेवारी अरुलाई ठान्नुभयो भने तपाईमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ रिस उत्पन्न हुन्छ यदी तपाई आफैलाई जिम्मेबार ठान्नुभयो भने तपाई अलि निरास हुनुहोला तर यसले तपाई अर्काेपल्ट सहि गर्ने प्रयास गर्नु हुनेछ । गल्ती खाज्नुको सट्टामा आफैलाई सुर्धान थाल्नु भयो भने तपाईको खुशी बढाउनेछ ।
मित्रहरु, यी सात बानीहरु कस्ता लागे, आफूलाई मनपरे अपनाउनुहोला र साथिहरुलाई सेयर गरिदिनु होला ।
खुशी र सुखी जीवनको शुभकामना !
Written by: Gopal Mishra
Edited and Translated by: www.lekhapadhee.com